qareen oo Laysinkooda Hannover horak Qareennada / Fachanwälte: Sharciga Caafimaadka, Sharciga Caymiska, u doodista bukaan, sharciga caafimaadka
horak. Qareenada - Sharciga Mas'uuliyadda Caafimaadka
Qareenka Sharciga Caymiska Caafimaadka, Sharciga Caafimaadka, Sharciga Caymiska iyo Sharciga Caafimaadka
Waxaan kugula talineynaa una mataleynaa bukaanka iyo dhakhaatiirta, isbitaallada ama caymiska la xiriira. Dabcan, waxaan iska ilaalinnaa khilaafaadka xiisaha leh, laakiin waxaan si buuxda ugu wargalineynaa dhammaan dhinacyada. Tani waxay faa'iido kuu tahay adiga iyo annaga, maxaa yeelay waxay noo suura gelineysaa inaan xallino kayskaaga iyada oo loo marayo qaabkeena khibradaheena iyo himilada ujeeddadeena.
Waxaan kugula talineynaa oo ku matalaynaa xaaladaha soo socda:
Xuquuqda Caafimaad / Sharciga Burburka: Qalabka daaweynta, oo leh cillado khibrad leh, oo leh qalad daaweynta, daawooyinka khaldan iwm.
Caddeynta iyo ilaalinta caddaynta: In xidhiidh la leh caddaymo ama helitaanka deyn caafimaad (taariikhdaada caafimaad, baaris of file bukaanka)
Sharciga Dembiga ee Mas'uuliyadda Caafimaadka (mas'uuliyadda dambi ee dhakhtarka ama shaqaalaha caafimaadka ee la xariira mas'uuliyadda caafimaad)
Honorarrecht: In difaaca qarashka sheegashada takhtarka ama xirfadlaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka ee kale (cisbitaalada, cisbitaalada qaaska ah, daaweynta, noocyada daawada kale, iwm)
Sharciga Caymiska: Caymiska caafimaadka (caymiska gaarka ah / sharci / caymiska dheeraadka ah) / caymiska hawlgabka
Sharciga takhaatiirtu waa qayb gaar ah oo ah sharciga caafimaadka waxana uu noqdaa mid muhiim u ah bukaanada. Mas'uuliyadda caafimaad waa tan ugu horeysa ee mas'uulka madaniga ee takhtarka bukaankiisa haddii uu dhaco jebinta waajibaadkiisa daryeelka. Haddii dhakhtarku si khalad ah u sameeyo qaladaadka inta lagu jiro daaweynta, wuxuu ku qasban yahay bukaanka.
Daaweyn ka hor, dhakhtarku had iyo goor wuxuu soo gabagabeynayaa qandaraas daweyn oo bukaankiisa ah, kaas oo uu takhtarku ku leeyahay daryeel caafimaad. Iyadoo aan oggolaan bukaanka, dhakhtarku ma samyn karo wax daaweyn ah. Haddii ogolaanshuhu uu ka maqan yahay, dhakhtarku wuxuu ku dhacaa dhaawac jidheed oo ciqaab ah, waxaana lagu ciqaabayaa sharciga madaniga ah ee falalka jirdilka ah. Sidaas awgeed, dhakhtarku waa inuu masuul ka yahay bukaanka dhaawaca soo gaara.
Maxay tahay inaad u shaqaaleysid qareen si aad u xun?
Waxaa had iyo jeer ma sahlana si loo ogaado a khaladaadka daawaynta iyo ka bannayn. Waxa intaa dheer in cover ee khibrad caafimaad, kiiska u baahan tahay waayo-aragnimo iyo aqoon sida qareen. Maxaa yeelay, haddii xumo caafimaad macnaha sharciga sharciga iyo kiiska la joogo, waa sharci ah oo aan su'aal caafimaad. Kanu waa warka culus ee caddeynta baadida, waxbarashada ama daaweyn failure Gaf ogaanshaha been kuwaas oo kiisaska intooda badan dhibanayaasha, si qiimayn sharciga ah ee kiiska waa mid aad u muhiim ah. Oo kaliya u gaar ah ku dul qareen ka dhigi kara fulinta ku habboon of magdhow iyo magdhow.
Waanu ku faraxsanahay inaanu ku caawino oo aanu kugula talino. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama aad jeclaan lahayd inaad ka faa'iidaysato adeegyadayada, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto
Your cinwaanka e-mail (baahan yahay)
Fadlan sharax kayskaaga hoosta
Bukaanku wuxuu si fudud u waydiin karaa isbitaalka daweynta in uu soo celiyo dhammaan dokumantiyada daaweynta
Bukaanku wuxuu dalbi karaa cusbitaal daweyneed - oo ka soo horjeeda kharashka kharashka - iyada oo aan loo baahnayn in la daabaco dhamaan dukumintiyada daaweynta. Si kastaba ha noqotee, magaca iyo cinwaanka dhakhtarrada ku jira daaweyntooda waa in loo wargaliyaa isbitaalka keliya haddii bukaanku muujiyo danta sharci ee xogta. Taasi waa waxa 26 leeyahay. Senateka Maxkamadda Sare ee gobolka Hamm ayaa go'aansaday 14.07.2017, sidaas oo ay u xaqiijinayso go'aanka kowaad ee Hirgelinta Bochum ee 27.07.2016 (Az. 6 O 9 / 16 LG Bochum).
Maqnaanshaha caymiska caafimaadka ee bukaanka, bukaanku wuxuu ahaanayaa kan deynta ah sida waafaqsan §§ 10 ee BPflV
Waxay leeyihiin shaqaale isbitaalka iyo bukaanka (kiiskan hooyada bukaanka yar ee), fikradda ah in caymiska ee caafimaadka dadweynaha ah ku adkaysanayaan in u qaadan kharashka isbitaalka, oo ay kor u qaaddaa sida qalad ka baxay, ka dibna la la'yahay (inta u dhaxaysa amar isbitaalka iyo bukaanka halkan xiran hooyadii bukaanka) heshiiska daaweyn fudud aasaaskii ganacsiga. The bixiyeen in maqnaanshaha ku saleysan qabsiga ee u dhexeeya side isbitaalka iyo bukaanka (kiiskan waalidka bukaanka) xiray Treaty daaweynta sababaha side isbitaalka in lagu go'aamiyo iyada oo la raacayo magdhow BPflV §§ 10 FF ee adeegyada guud ee isbitaalka (bukaanka waxay codsan karaan hooyada ah ee bukaanka): halkan. BGH, xukumaadda ee 28. April 2005 - III ZR 351 / 04 - OLG Koblen LG Koblenz.
Ilaalinta bukaanka xaqa uu u leeyahay is-xukunka
Ilaalinta go'aan-is bukaan-socodka u baahan yahay bixinta daaweynta kale haddii ay jiraan dhawr fursadood oo daaweyn u dhiganta diyaar u ah therapy ah caafimaad ahaan macno leh oo xaddiday.
Maxkamadda racfaanka ayaa si sax ah u xaqiijisay in eedaysanuhu haystay waajibaad ah inuu bixiyo macluumaad uu laba daweyn oo la kala dooran karo, mid ka mid ah nidaamka cusub ee waddankaas wakhtigaas. Maxkamadda garashada Senate doorashada ee Behandlungsmetho-de Inkasta oo ugu horayn mas'uul ka ah takhtarka (xukummo Senate BGHZ 102, 17, 22, 106, 153, 157, ka 11 May 1982 - VI ZR 171 / 80 - VersR 1982, 771. . 772, ka 24 1987 No-vember - VI ZR 65 / 87 - VersR 1988, 190, 191 iyo March 15 ku 2005 - VI ZR 313 / 03 - VersR 2005, 836 ;. OLG Zweibrücken, OLGR 2001, 79, 81 la NA-Go'aanka Guddida 19 December 2000 - VI ZR 171 / 00 - ;. OLG Karlsruhe, MedR 2003, 229, 230).
Laakiin ilaalinta ee go'aan-is bukaan-socodka u baahan yahay bixinta daaweynta kale marka fursadaha daaweynta siman badan ayaa diyaar u ah therapy ah caafimaad ahaan macno leh oo xaddiday la heli karo in ay leeyihiin doonaa nooc kala duwan ee bukaanka ama khataraha kala duwan ganacsiga iyo fursadaha (xukummo Senate BGHZ 102, 17 ., 22, 106, 153, 157, ka 14 September 2004 - VI ZR 186 / 03 - VersR 2005, 227, ka 15 March 2005 - VI ZR 313 / 03 - Ibid ;. bisadaha Meier, maamul xumo, 2002, p 331 f ., ..... MünchKommBGB / Wagner, ed 4, § 823 707 RN f,. Staudinger / Hager, BGB, 13 baaraandegidda  § 823, RN waxaan 92 tixraacyo dheeraad ah).
Kormeerka dukumiintiyada daaweynta ee qareennada tijaabada ah ee ku jira dacwada daaweynta
xisbiga saddexaad ee waafaqsan § 134 ABS ay labada dhinac sida ay § 142 ZPO ama. 1 ZPO gudbiyaa dukumentiyada asalka ah ma aha qayb ka mid ah diiwaanada maxkamadda. xaq A si ay u helaan in file ama arrinta nuqulo si toos ah uma raaco ka § 299 ZPO. Dukumiintiyada tooska ah ee maraakiibta maxkamadda. § 142 ZPO laga helo labada dhinac saddexaad, waxaa jira xaq u leedahay inaad Dhalmada, laakiin sida laga soo xigtay si ay u dhawraan mabaadi'da in la labadaba ka qodobada §§ 131, 133 ZPO iyo codsiga le'eg oo ka mid ah § 299 ZPO maqlay. Art. Para 103. 1 GG.
§ 299 ZPO siinayaa diraya waraaqaha loo soo gudbiyey ay tahay talada xisbiyada ma cad. Laakiin tagaasida ka qaadan kartaa meel ka dib markii tixgelin ku habboon, haddii files ma aha qaataha lagama maarmaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Go'aaminta xuquuqda difaaca waa in la tixgeliyaa.
Isla sidaas u dhaqmaan ay soo gudbiyeen xisbiyada ama la raacayo § 142 ZPO shahaadooyinka xisbiga saddexaad iyo waraaqaha marka uu qofku u dhexeeya maxkamadda iyo heshiisyada xabsiga ayaa la galay, u ogolaaday in uu soo diri files in ay wakiil. Ka hor inta maxkamadda oo diiday inuu u soo diro, waxa uu marka hore in la codsaday ee xisbiga saddexaad haddii ay ku heshiiyaan in ay u diraan dukumentiyada in wakiillada labada dhinac.
garyaqaan Arzt oo Laysinkooda sheegashada liability Medical habboon oo Laysinkooda habka maamul xumo oo Laysinkooda Arzthonorar sharciga caafimaadka Qalabixinta dhakhtarkaaga dembiyada aragti Cadaynta dhaawaca waajibaadka siidaynta habka geek daaweynta failure Behandlungsvertrag BGH Dhakhtar diidmo Erstoperation Farsameynta hawlaha caafimaadka Goa liability isbitaalka Weerar la dilo Shaqada waaxda sheegashooyinka bukaanka Patientenanwaltschaft Macluumaadka bukaan-socodka Xuquuqda bukaanka garyaqaan Rikoodhaweyn Regressfall Daah halis opinion khabiir magdhow magdhow magdhowga xaddidaadda Versicherung dib u dhac xukun default overacceleration
Waajibaadka kugula socodsiiya takhtarka waxaa ku jira kaliya marka la eego khatarahaas oo horeba loo yaqaan waqtiga daaweynta.
Cuntada daawada lagama rabo in ay ka qaadaan qiimaha ugu yar ee daawooyinka dhakhtarku qoro
§ 12a ApoG: Farmashiiste khabiir ah waa in uu ku shaqeeyaa "farmashiyaha guriga" oo bilaash ah laguna siiyo magdhow lacageed oo ah dadaal aan wali la helin
Ka gaabinta Daaweynta xoolaha
Xitaa iyada oo la saxiixay qandaraas adeeg ah oo la saxiixay, qiimaha baajinta ayaa ah mid aan la aqbalin haddii ballanta qalliinka la joojiyo
Ma jirto sheegasho bukaanka ka dhanka ah shirkadda isbitaal bixinta ee cinwaanka gaarka ah ee dhakhtarka kireysan
Daahfaahinta caddaynta jebinta waajibaadka ah in la ogeysiiyo uurka
Mas'uuliyadda qayb ka mid ah macallimiin, qayb ahaan waxaa sababay khasaare caafimaad oo khasaare caafimaad ah oo la xiriira munaasabadda dhalashada
ajuurada Medical sharci
hawlgalka marka hore
sharciga cillado lagu dhasho
Loss of dakhliga
heshiis adeeg Optional
Ururka Caafimaadka ee Saxafiyiinta
Qareenka Horak Hannover
Guddiga heshiisiinta waqooyiga Jarmalka
Xafiiska iskaa wax u qabso
Talo-bixin bukaan-socod oo madaxbanaan
Copyright © 2018 horak. Qareenada - Sharciga Mas'uuliyadda Caafimaadka, Bixiyaa WordPress. Mawdada: Dardar gelinta von ThemeGrill.